धेरै समय पछि यस अगस्ट महिनामा राजयोग बन्दै, यी पाँच राशिमा पर्नेछ शुभ प्रभाव ! बदलिनेछ भाग्य ! - Taja Report
Homeबिज्ञान प्रबिधिधेरै समय पछि यस अगस्ट महिनामा राजयोग बन्दै, यी पाँच राशिमा पर्नेछ शुभ प्रभाव ! बदलिनेछ भाग्य !
धेरै समय पछि यस अगस्ट महिनामा राजयोग बन्दै, यी पाँच राशिमा पर्नेछ शुभ प्रभाव ! बदलिनेछ भाग्य !
August 6, 2018 बिज्ञान प्रबिधि Comments Off on धेरै समय पछि यस अगस्ट महिनामा राजयोग बन्दै, यी पाँच राशिमा पर्नेछ शुभ प्रभाव ! बदलिनेछ भाग्य !
ज्योतिष शास्त्रमा ग्रह परिवर्तनले धेरै खास महत्व राख्ने गर्छ। ग्रहको राशि परिवर्तनले राशिचक्रमा रहेका सम्पूर्ण राशिहरुलाई प्रभावित गर्ने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रमा ग्रहको चलका कारण दैनिक राशिफल निर्धारण हुने गर्छ। साथै ग्रहहरु कुनै विशेष अवस्थामा रहेको समयमा विशेष योग बन्ने गर्छ। अगस्ट ९ को दिनमा राजयोग बन्ने ज्योतिषहरुले बताएका छन्। यस योगका कारण विभिन्न राशिहरुलाई विशेष लाभ मिल्ने गर्छ। राजयोगका कारण विशेष गरेर धन लाभ मिल्ने गर्छ।
राजयोगको कारण यस राशिलाई धेरै शुभ रहने देखिन्छ। अचानक धन लाभ मिल्न सक्ला, नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुन सक्ला। व्यवसायमा भनेको जस्तै प्रगति हुनाले मानसिक रुपमा खुशी मिल्न सक्ला।
राजयोग मिथुन राशिहुनेहरुको लागि शुभ फल प्रदान गर्ने देखिन्छ। जीवनसाथी साथै प्रेमीसंगको सम्बन्ध धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्ला भने भाग्यले पूरा साथ दिनाले प्रगति तर्फ अग्रसर गराउन राजयोगले सहयोग गर्न सक्ला।
राजयोग सबै भन्दा सिंह राशिको लागि धेरै शुभ रहने देखिन्छ। सम्पूर्ण पारिवारिक, सामाजिक साथै आर्थिक योजना सम्पन्न गर्नको लागि खासै दुख गर्नु नपर्ने देखिन्छ। मान-सम्मान पनि बढ्न सक्ला भने समाजमा सम्मान बढाउने सौभाग्य मिल्नेछ।
राजयोगले वृश्चिक राशि हुनेगरुको लागि भारी धनलाभ मिल्न सक्ला। कलात्मक र सृजनात्मक शक्तिमा अचानक निखार आउने देखिन्छ। भाग्यको भरपूर साथ मिल्नाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने देखिन्छ।
राजयोग मीन राशिको लागि धेरै खास रहन सक्ला। स्वास्थमा पनि धेरै सुधार आउने देखिन्छ। व्यापारीहरूको लागि पनि समय धेरै राम्रो हुन सक्ला। जागिरको लागि पनि नयाँ अवसर प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। व्यापारसँग सम्बन्धित यात्रा पनि सफल हुन सक्ला।
साउदी अरब जेलबाट नेपाल आउँदा प्रेमबहादुरका आमा,श्रीमती र छोरिको खुशीको आशु थामिएन,सबैको सहयोगले नानीले बाबा भन्न पाइन् : श्रीमती [भिडियो सहित ]
त्रिशूली खोलाको ताजा माछा भन्दै बेचेर घर खर्चको जोहो गर्दै !
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (239)
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (91)
पत्ता लाग्यो एड्सको औषधी, गाई भित्र यस्तो शक्ती ….. (90)
दाँतको किरा मार्न र दुखाई कम गर्न अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय!!जानी राखौ (88)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (65)
म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ (65)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (52)
जहाँ केटीहरु विवाह गर्न केटा नपाएर तड्पिन्छन [भिडियो हेर्नुहोस ] (36)